Ọrụ Ndịozi 14 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ọrụ Ndịozi 14:1-28
14 N’Aịkoniọm,+ ha banyekọrọ n’ụlọ nzukọ+ ndị Juu ma kwuo okwu n’ụzọ mere ka ìgwè mmadụ dị ukwuu nke gụnyere ndị Juu na ndị Grik+ ghọọ ndị kwere ekwe. 2 Ma ndị Juu na-ekweghị ekwe kpasuru+ ndị mba ọzọ ma mee ka ha nwee obi ọjọọ n’ebe ụmụnna nọ.+ 3 Ya mere, ha nọtụrụ ogologo oge na-ekwu okwu n’atụghị egwu site n’ikike Jehova, bụ́ onye gbara akaebe banyere okwu nke obiọma ya na-erughịrị mmadụ site n’inye ha ikike ime ihe ịrịba ama na ihe ebube.+ 4 Otú ọ dị, ìgwè mmadụ nọ n’obodo ahụ kewara abụọ, ụfọdụ dịnyeere ndị Juu ma ndị ọzọ dịnyeere ndịozi ahụ. 5 Mgbe ndị mba ọzọ na ndị Juu, tinyere ndị na-achị ha, gbara ajọ mbọ imenye ha ihere na ịtụ ha nkume,+ 6 mgbe a gwara ha banyere ya, ha gbagara+ n’obodo ndị dị na Likeonia, bụ́ Listra na Dabe na ógbè ndị dị ha gburugburu. 7 Ha gakwara n’ihu na-ezisa ozi ọma n’ebe ndị ahụ.+ 8 Na Listra e nwere otu nwoke nọ ọdụ bụ́ onye nwere nkwarụ n’ụkwụ ya. Ọ dara ngwọrọ site n’afọ nne ya,+ ọ jetụbeghịkwa ije. 9 Nwoke a nọ na-ege Pọl ntị ka ọ na-ekwu okwu. Mgbe Pọl legidere ya anya ma hụ na o nwere okwukwe+ ịbụ onye a ga-eme ka ahụ́ dị mma, 10 o kwuru n’olu dara ụda, sị: “Guzoro kwem n’ụkwụ gị.” O wee malie ma malite ije ije.+ 11 Mgbe ìgwè mmadụ ahụ hụrụ ihe Pọl mere, ha malitere iti mkpu, na-ekwu n’asụsụ ndị Likeonia, sị: “Ndị bụ́ chi+ adịrịwo ka ụmụ mmadụ wee gbadakwute anyị!” 12 Ha wee malite ịkpọ Banabas Zus, ma na-akpọ Pọl Hemis, ebe ọ bụ ya na-ebute ụzọ n’ikwu okwu. 13 Onye nchụàjà Zus, bụ́ nke ụlọ nsọ ya dị n’ihu obodo ahụ, wetara oké ehi na ihe ịchọ mma ndị a na-eke n’isi n’ọnụ ụzọ ámá ma chọọ ka ya na ìgwè mmadụ ahụ chụọ àjà.+ 14 Otú ọ dị, mgbe ndịozi bụ́ Banabas na Pọl nụrụ banyere ya, ha dọwara uwe elu ha ma maba n’etiti ìgwè mmadụ ahụ, na-eti mkpu, 15 sị: “Gịnị mere unu ji eme ihe ndị a? Anyị onwe anyị kwa bụ mmadụ+ ndị nwere otu ụdị adịghị ike ndị unu nwere,+ anyị na-ezisara unu ozi ọma, ka unu wee hapụ ihe efu+ ndị a ma bịakwute Chineke ahụ dị ndụ,+ onye kere eluigwe+ na ụwa na oké osimiri na ihe niile dị n’ime ha. 16 N’ọgbọ ndị gara aga, o kwere ka ndị mba ọzọ niile nọgide na-eje ije n’ụzọ ha,+ 17 ọ bụ ezie na ọ hapụghị onwe ya n’enweghị ihe àmà, ebe o mere ihe ọma,+ na-enye unu mmiri ozuzo+ site n’eluigwe, na oge mkpụrụ ji amị, na-enyekwa unu nri n’ụba, na-emekwa ka unu nwee obi ụtọ.”+ 18 Ma n’agbanyeghị ihe ndị a ha na-ekwu, o siri ike tupu ha egbochie ìgwè mmadụ ahụ ịchụrụ ha àjà. 19 Ma ndị Juu si Antiọk na Aịkoniọm bịa wee rụgide ìgwè mmadụ ahụ,+ ha wee tụọ Pọl nkume ma dọkpụpụ ya n’azụ obodo, na-eche na ọ nwụọla.+ 20 Otú ọ dị, mgbe ndị ahụ na-eso ụzọ Jizọs gbara ya gburugburu, o biliri ma banye n’ime obodo. N’echi ya, ya na Banabas gawara Dabe.+ 21 Mgbe ha zisasịịrị obodo ahụ ozi ọma, meekwa ka ọtụtụ ndị bụrụ ndị na-eso ụzọ Jizọs,+ ha laghachiri na Listra, na Aịkoniọm, na Antiọk, 22 na-ewusi mkpụrụ obi nke ndị na-eso ụzọ Jizọs ike,+ na-agba ha ume ka ha nọgide n’okwukwe Ndị Kraịst, sị: “Anyị aghaghị ịbanye n’alaeze Chineke site n’ọtụtụ mkpagbu.”+ 23 Ha họpụtakwaara ha ndị okenye+ n’ọgbakọ nke ọ bụla, mgbe ha buru ọnụ,+ kpeekwa ekpere, ha nyefere ha n’aka Jehova,+ bụ́ onye ha kweere na ya. 24 Ha wee gafere na Pisidia ma bata na Pamfilia,+ 25 mgbe ha kwusịrị okwu Chineke na Paga, ha gbadakwara Atalaya. 26 Ha sikwa n’ebe ahụ soro ụgbọ mmiri gawa Antiọk,+ bụ́ ebe e nyefere ha n’aka obiọma Chineke nke na-erughịrị mmadụ, n’ihi ọrụ ha rụrụ.+ 27 Mgbe ha bịarutere ma kpọkọta ọgbakọ ahụ, ha kọrọ+ ọtụtụ ihe Chineke mere site n’aka ha, kọọkwa na o megheworo ndị mba ọzọ ọnụ ụzọ nke okwukwe.+ 28 Ya mere, ha na ndị na-eso ụzọ Jizọs nọrọ ruo ogologo oge.
Ọrụ Ndịozi 14